မြကျွန်းသာမိုးကုတ်ရိပ်သာ | Mya Kyun Thar isanewly founded Meditation Centre headed by Venerable Dr. Ashin Parami. It is situated in the Yadanarkyun Ward, Thunandar Road, North Okkala, Yangon, Myanmar. It follows the technique of Mogoke Sayadaw Phayargyi, an eminent meditation master in 1960s. | Page 31
(12) Relative Clauses (B)
4. Giving Additional Information Relative clauses တွေမှာ ပုဂ္ဂိုလ်၊ အရာဝတ္ထုတွေအကြောင်း ထပ်မံပြောဆိုဖို့ who, whom, whose, which တို့ကို သုံးတယ်။ that ကိုတော့ မသုံးဘူး။ As subject My uncle, who was born in Hong Kong, lived most of his life overseas. I have just read Orwell’s 1984, which is one of the most frightening books ever written. Note: Relative pronoun ဟာ clause ရဲ့ subject ဖြစ်တယ်။ Subject […]
ငလျင် ကပ်ဘေးပြီးတော့ နူကလီးယား ကပ်ဘေးပါ ကျရောက်နေသော ဂျပန်နိုင်ငံ၊ ဒုတိယမြောက် နူကလီးယား သိုလှောင်ကန် အမှတ်-၃ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွါး၊ သေဆုံးသူပေါင်း မှာလည်း ၂ သောင်းကျော်သွားပြီ။… Written by : ဇော်ဇော် 2011-03-14 10:31:03 ငလျင် ကပ်ဘေးပြီးတော့ နူကလီးယား ကပ်ဘေးပါ ကျရောက်နေသော ဂျပန်နိုင်ငံ၊ <br>ဒုတိယမြောက် နူကလီးယား သလိုလှောင်ကန် အမှတ်-၃ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွါး၊ သေဆုံးသူပေါင်း မှာလည်း ၂ သောင်းကျော်သွားပြီ။… ဂျပန်နိုင်ငံရှိ ငလျင်ဘေးထိ ဒုက္ခသည်များအတွက် နောက်ထပ် ဆိုးရွားမှုအဖြစ် နူကလီးယား မတော်တဆမှု ပြဿနာများ ရင်ဆိုင်နေရသည့် သတင်းဆိုးများ နေ့စဉ် ကြားနေရချိန်တွင်ပင် ယနေ့ညနေ အချိန်ကလည်း ပထမပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ခဲ့ရာ Fukushima နူကလီးယား လျပ်စစ်ဓါတ်အားပေးစက်ရုံရှိ နူကလီးယား သိုလှောင်ကန် အမှတ်-၃ လည်း […]
ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ ခန္ဓာ့ဖြစ်စဉ် (၃)
မေးမယ်ဆိုရင် မေးသင့်တဲ့ နောက်သစ္စာတစ်ခုက နိရောဓသစ္စာ၊ ဒုက္ခချုပ်တာဟာ နိရောဓသစ္စာပါပဲ။ ခန္ဓာငါးပါး ဒုက္ခသစ္စာကြီးဟာ ရှုရင်းမတ္တနဲ့ ဉာဏ်ရင့်လို့ ဉာဏ်အောက်မှာ ပျောက်သွားရင် ခန္ဓာပျောက်သွားတယ်။ ခန္ဓာပျောက်တာသည် ဒုက္ခတွေပျောက်တာပါပဲ။ ဒုက္ခပျောက်တော့ နိရောဓသစ္စာပေါ်တယ်။ ဒုက္ခတွေပျောက်သွားတာဟာ နိဗ္ဗာန်ပဲတဲ့။ ခန္ဓာငါးပါး ပေါ်ရာခန္ဓာတစ်ခုခုကို ဖြစ်ပျက်ရှုလိုက်တော့ သူတို့က အတွဲလိုက်ဖြစ်သောကြောင့် ကိုယ်ရှုတာတစ်ခုပျောက်သွားလို့ရှိရင် အတွဲလိုက် အကုန်ပျောက်တယ်။ ဘာတွေအကုန်ပျောက်သွားတာလဲဆိုရင် ဒုက္ခသစ္စာ အကုန်ပျောက်သွားတာ။ ဒုက္ခတွေ တစ်ပြုံကြီးပျောက်သွားတာဟာ ဒုက္ခနိရောဓော နိဗ္ဗာနံ။ ဒါဟာ နိရောဓသစ္စာသိတာပဲ။ ဒုက္ခနဲ့ အိုးစားကွဲတဲ့အဆင့်ရောက်ခွင့်ရတယ်။ ဒုက္ခမရှိတာ နိရောဓသစ္စာပဲလို့ သိတော့ ဒီနိရောဓသစ္စာရအောင် ကြိုးစားချင်စိတ်ပေါ်ခြင်းဆိုတဲ့ ကောင်းကျိုးတွေရှိတယ်။ ဒါကြောင့် မေးချင်ရင် သစ္စာမေးဖို့ အရေးကြီးတယ်တဲ့။ ဖြစ်ပျက်ဟာ ဒုက္ခသစ္စာ၊ ရှုနေတဲ့ဉာဏ်လေးက မဂ္ဂသစ္စာ။ ဒါတွေ ဉာဏ်နဲ့သိအောင်ရှုမှ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်က ပြတ်မှာ။ ပြတ်အောင်ဖြတ်တာဟာ မဂ်ကဖြတ်တာပါ။ မဂ်သည် ကိလေသာတွေကို […]
(12) Relative Clauses
1. The Relative Pronouns Subject Object Possessive who whom, who whose which which whose that that လူတွေအတွက် who, whom ကိုသုံးပြီး အရာဝတ္ထုတွေအတွက် which ကိုသုံးတယ်။ that ကိုတော့ လူတွေအတွက်ရော အရာဝတ္ထုတွေအတွက်ရော သုံးတယ်။ Relative pronouns တွေကို relative clauses တွေကို အထူးပြုဖို့၊ လူတွေ အရာဝတ္ထုတွေ အကြောင်း ထပ်ပြောဖို့ သုံးတယ်။ 2. Relative clauses to postmodifyanoun Relative clauses တွေဟာ noun ကိုနောက်ကနေအထူးပြုတယ်။ ပြောလိုက်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်၊ အရာဝတ္တုတွေဟာ ဘယ်ဟာတွေလဲဆိုတာ ပိုမိုရှင်းလင်းအောင် ပြောပြတယ်။ ဒီ clauses […]
ငလျင်သတင်းနှင့်ဓာတ်ပုံများ စိတ်မကောင်းစရာ ၀မ်းနည်းတုန်လှုပ်စရာများကို ရုတ်ချည်း ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည့် ဆိုးဝါး ကြမ်းတမ်းလှသော Level9ဆန်ဒိုင်းငလျှင်နှင့် ဆူနာမီကြောင့် ဂျပန်နိုင်ငံမှ လူအသေအပျောက်စါရင်းမှာ တစ်သောင်းကျော်ပြီဟု ခန့်မှန်းခြေ သေစါရင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့၊ နိုင်ငံတကာမှ အကူအညီပေး ကယ်ဆယ်ရေး အဖွဲ့များနှင့်အတူ အနံခံ ခွေးများ ရောက်ရှိလာ Written by : မှူးသခင် 2011-03-13 16:33:07 စိတ်မကောင်းစရာ ၀မ်းနည်းတုန်လှုပ်စရာများကို ရုတ်ချည်း ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည့် ဆိုးဝါး ကြမ်းတမ်းလှသော Level9ဆန်ဒိုင်းငလျှင်နှင့် ဆူနာမီကြောင့် ဂျပန်နိုင်ငံမှ လူအသေအပျောက်စါရင်းမှာ တစ်သောင်းကျော်ပြီဟု ခန့်မှန်းခြေ သေစါရင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့၊ နိုင်ငံတကာမှ အကူအညီပေး ကယ်ဆယ်ရေး အဖွဲ့များနှင့်အတူ အနံခံ ခွေးများ ရောက်ရှိလာ ပြီးခဲ့သည့် သောကြာနေ့ မွန်းလွဲ ၂နာရီ ၄၆မိနစ် ဂျပန်စံတော်ချိန်တွင် […]
ဂျပန်နိုင်ငံသမိုင်းတစ်လျောက် ဒုတိယမြောက် နူကလီးယား အန္တရာယ်နှင့် ရင်ဆိုင်နေရ Tokai နူကလီးယားစက်ရုံ Power Plant No.2 မှာလည်း အအေးပေးစနစ်များ လုံးဝ ပျက်သွားပြီး ပေါက်ကွဲလုလု အနေအထားဖြစ်နေ Written by : ဇော်ဇော် 2011-03-13 20:39:27 ဂျပန်နိုင်ငံသမိုင်းတစ်လျောက် ဒုတိယမြောက် နူကလီးယား အန္တရာယ်နှင့် ရင်ဆိုင်နေရ <br> Tokai နူကလီးယားစက်ရုံ Power Plant No.2 မှာလည်း အအေးပေးစနစ်များ လုံးဝ ပျက်သွားပြီး ပေါက်ကွဲလုလု အနေအထားဖြစ်နေ ပြီးခဲ့သည့် သောကြာနေ့ ဒေသစံတော်ချိန် မွန်းလွဲ ၂နာရီ ၄၆မိနစ်က ဆန်ဒိုင်း အရပ်ကို ဗဟိုပြုကာ ဂျပန်နိုင်ငံ သမိုင်းတစ်လျောက် အင်အား အကြီးဆုံး ငလျင်အဖြစ် (နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ထားသည့် ငလျင် လှုပ်ခဲ့သည့်နှုန်း) ၉.၀ မဂ္ဂနီကျူ့ […]
ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ ခန္ဓာ့ဖြစ်စဉ် (၂)
အရှင်သာရိပုတ္တရာက ဆက်မေးတယ်။ `အရှင်ဘုရား သတ္တ၀ါသေရင် မဖြစ်တော့ဘူးလား´တဲ့။ ဒါလဲ မဖြေကောင်းတဲ့ အမေးပဲတဲ့။ အရှင်မဟာကဿပမထေရ်မြတ်ကြီးက ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တ၀ါ မရှိလို့။ သတ္တ၀ါမရှိတော့ ဖြစ် မဖြစ်မေးနေသော်လဲ အပိုပဲ။ ဒီလိုသိတာသည် ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နားလည်လို့။ ဒါမသိလို့ရှိရင် သတ္တ၀ါသေရင် မဖြစ်တော့ဘူးထင်တယ်ဆိုပြီး ၀ိစိကိစ္ဆာက လာမယ်။ သေရင် ဘာမှဖြစ်စရာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်လဲ ဥစ္ဆေဒဒိဋ္ဌိဝင်လာမယ်။ သေရင် ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ သဿတဒိဋ္ဌိ၊ သေရင်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ ဥစ္ဆေဒဒိဋ္ဌိ။ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နားမလည်လို့ရှိရင် သဿတဒိဋ္ဌိသော်လည်းကောင်း ဥစ္ဆေဒဒိဋ္ဌိသော်လည်းကောင်း ဖြစ်တယ်။ တတိယမေးခွန်းက `သတ္တ၀ါသေပြီးနောက် ဖြစ်ချည်တစ်လှည့် မဖြစ်ချည်တစ်လှည့်လား´။ ဒါလဲ မဖြေကောင်းဘူးတဲ့။ သတ္တ၀ါမှမရှိဘဲ၊ စုတိပြီးရင် ပဋိသန္ဓေပေါ်တာပဲ ရှိတယ်။ စုတိကလဲ စိတ်ပဲ၊ ပဋိသန္ဓေကလဲ စိတ်ပဲ။ တစ်စိတ်ပြီးရင် တစ်စိတ်ပေါ်တာသာ ရှိတယ်။ နောက်တစ်ခါ `သတ္တ၀ါသေရင် မဖြစ်သည်မဟုတ်၊ ဖြစ်တဲ့သဘောလေးများ ရှိသေးလား´။ ဒါလဲ မဖြေကောင်းဘူးတဲ့။ […]